Rakkoo Oromiyaa keessatti uumame furuudhaaf mootummaan marii siyaasaaf haala mijeessuu, humnatti dhimma bayuu dhiisuu qaba jetti Ameerikaan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Rakkoo Oromiyaa keessatti uumame furuudhaaf mootummaan marii siyaasaaf haala mijeessuu, humnatti dhimma...
Rakkoo Oromiyaa keessatti uumame furuudhaaf mootummaan marii siyaasaaf haala mijeessuu, humnatti dhimma bayuu dhiisuu qaba jetti Ameerikaan
Waajjira Haajaa Biyya-alaa Ameerikaatti itti aanaan dhimma dimokraasii fi mirga namoomaa Tom Malinowski rakkoo Oromiyaa keessatti uumame irratti angawoota mootummaa Itoophiyaa heddu waliin mari’ataniiru. Waa’ee Oromiyaatti aansee, jilli Ameerikaa kuni yeroo Finfinnetti argametti dhimmoota dimokraasii, filannoo, haala mirga namoomaa, miidiyaa, sochii dhaabbilee haawaasaa fi bulchiinsa gaarii irratti xiyyeeffannaa laatuudhaan angawoota waliin marii taasisaniiru.
Mootummaan Itoophiyaa rakkoo Oromiyaa keessatti uumameef itti gaafatamummaa fudhachuu kan dinqisiifatu ta’uu isaati Tom Malinowski kan gabaasaa VOA’tti hime. Ta’us, rakkoo kana bu’uuraa furuudhaaf tankaarfii cimaa fi murteessaa fudhachutu mootummaa Itoophiyaa irraa eeggama.
Rakkoo gurguddoo amma Oromiyaa keessatti uumame bu’uuraa furuun dhimma yeroo gaafatu ta’uu nimala, akka Tom Malinowski tti. Ammatti garuu, mootummaa Ameerikaatiif dhimmi murteessaan ykn yaachisaan amanamiinsa ummata biraa dhabe deebi’ee argachuudhaaf tankaarfii mootummaan Itoophiyaa fudhatuudha. Mootummaan Itoophiyaa amanamiinsa dhabe argachuudhaaf, akka Tom Malinowski itti, ammumaa kaasee waltajjii marii siyaasaa ifa ta’e banuu, hirmaannaa siyaasaa hayyamuu, mootummaan humna woraanaatti dhimma bayuudhaan ummata ukkaamsuu fi doorsisuu dhiisuu fi qaamoleen hawaasaa rakkoo Oromiyaa keessatti uumame irratti akka mari’atan haala mijeessuu fi aanjessuu qaba. Yeroo osoo itti hin laanne dhimmoota kanniin irratti hojjachuu qofa kan mootummaan kuni rakkoo uumame furuudhaaf murannoo qabaachuu isaa kan argisiisu, akka anagawaa Ameerikaa kanatti.
Mootummaan Itoophiyaa rakkoo Oromiyaa keessatti uumame hundeedhaa furuuf jecha marii hawasaa geggeessaa jirachuu isaati kan odeessaa jiru. Akka taajjabdootaatti, mariin kuni ifaa fi walabaa miti. Ammas irra jireessatti marii kana irraa qooda kan fudhataa jiran qaamota mootummaa deeggaranii fi imaammata isaa jala masakamaniidha. Hanga ammaatti marii ifaa fi walaba ta’e mootummichi jarmayaalee siyaasa fi qaamota hawaasaa addaddaa jiddutti geggeessuudhaaf fedhii fi murannoo hin argisiisne. Hanga amamattii kan ifatti mula’aata jiru mootmmaan hoogganoota jarmayaalee fi dargaggoo Oromoo baay’inaan hidhuu, doorsisuu fi akka hin sochoone taasisuudha. Hala kana keessatti mariin ta’aa jiru hundi, isa Abbootii Gadaa Oromoos dabalatee, akkuma kana dura baratame, hujii ummata gowwoomsuu fi yaalii ergaa sobaa gara hawaasa addunyaatti dabarsuuti. Barana itti milkaayuu laata?
sochii naannoo oromiyaa
tankaarfii mootummaa ameerikaa
Previous articleWoyyaaneen ufiin hin beektu itti himan ammoo hin dhageettu
Next articleIPS: Ethiopia’s Smoldering Oromo